राष्ट्रपति भण्डारीकी आमा वृद्धा आश्रममा [फोटो फिचरहरु] | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
‘आमा वृद्धा आश्रममा’ भन्ने यो शब्द सुन्दै ज्यादै निरस लाग्छ । अनि भावना र कठोरताको गहिराईको मापन गर्न तिब्र इक्छा जाग्छ । १० महिना कोखमा राखी १० धारा दुध चुसाएर कठोर संघर्ष गरेर आफुलाई सक्षम बनाएकी आमालाई आज वृद्धा आश्रममा राख्नेहरुको कठोर चित्त शायद कालो पत्थरले बनेको हुनुपर्छ ।
जन्म दिने आमालाई कृतिम आश्रममा एकलै छोडीदिने सन्तानहरुको मुटु कुन धातुले बनेको हुन्छ होला ? उनीहरुको हृदय कुन निर्जीव बस्तुले सजिएको हुन्छ होला ?
गरिबी हुनु अर्थात अभावमा जिउनु कर्मको फल हो । कर्मले जस्तो फल दिन्छ त्यसैमा पूर्ण सन्तुष्टि हुनु मानव जातिको गुण हो । अभावको हुरीबतासले जिन्दगि उजाड पार्दा पनि सन्तान प्रति आमाको मन कहिलै उजाड बन्दैन, केवल सन्तान संग-संगै ज्युउने तिनै आमाको कोमल अठोट बाँची रहन्छ ।
तर नेपालका बृद्द आश्रमहरुमा भने अभाव र गरिवीको चपेटा मुनि परेका आमाहरु बस्दैनन् । सुन फलाउने सन्तानका आमाहरु कथित सुख सयलको वहानामा आश्रमको बास बस्नु पर्छ । छोरा बुहारीहरू अमेरिका, युरोप तिर पैसा फलाउछन तर आफुलाई जन्म दिने आमालाई एकलै आश्रममा छोडेका छन् ।
तिनै सुन फलाउने छोराहरुले आफ्नो सन्तान संगै बसेर न्यानो बाँड्न चाहाने आमाहरुको भावनालाई चाहेर पनि बुझ्न सक्दैनन् । र आमाहरु छोरा-छोरीको हरखुसीमा साथ् दिन तयार हुन्छन, त्यहि भएर वृद्धा आश्रममा बस्ने आमाहरुले आफ्नै सन्तानको खुसीको लागि भन्ने गर्छन:-
‘म मेरै रहरले आश्रममा बसेकी हुँ, छोराछोरीले छोडेका हैनन है बाबु ।’
यहाँ प्रस्तुत तस्बिरहरु मोरङको चतरामा एउटा वृद्धाश्रमको हो, जहाँ सम्मानीय राष्ट्रपति बिद्या देवी भन्डारीकी ममतामयी आमा मिथिला पाण्डे बस्नुहुन्छ । उहाँकै अध्यक्षतामा बृद्द आमाहरु बस्ने गर्छन ।
लेखक दिल निशानी मगर यात्राको क्रममा मिथिला वृद्धा आश्रममा पुगेको बेला आश्रमकि अध्यक्ष उर्फ राष्ट्रपति भण्डारीकि आमा संग कुराकानीको अंश जस्ताको त्यस्तै लोकान्तरबाट साभार गरेका छौ । हेर्नुहोस:
यो पनि पढ्नुहोस बैङ्कमा छिरेका चोर समात्ने सुरक्षागार्ड पुरस्कृत
यो पनि पढ्नुहोस कार्यदललाई ७ गतेभित्र अनिवार्यरुपमा प्रतिवेदन बुझाउन निर्देश
यो पनि पढ्नुहोस नेपाल विद्युत प्राधिकरण जोरपाटी वितरण केन्द्रले आज मंगलबार दिनभर विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने
तस्बिर -दिल निशानी मगर
२६,चैत्र.२०७४,सोमबार ११:३० मा प्रकाशित
← ‘प्रदेश सरकार सेनाबिनाको सेनापतिजस्तो भयो’
दुई तिहाइको प्रावधानले अन्योल संसद →